Apple Park fananganana efa ho vita | Avy amin'ny mac aho
Ny sidina Drone amin'ny Apple Park dia tsy nijanona na eo aza ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny vavahady. Araka ny hitantsika tamin'ny horonantsary farany, ny ankamaroan'ny fametrahana ny asa efa vita, noho izany dia azo inoana fa tsy ho ela, ny asa sisa mbola tsy nahavita tany ivelany dia hahavita izany.
Araka ny hitantsika amin'ny horonantsary farany navoakan'i Matthew Roberts, mitohy ny asa mifantoka amin'ny fanaingoana any ivelany indrindra, toy ny tamin'ny volana lasa, satria izy io dia iray amin'ireo faritra nandinihan'i Apple manokana, na ny ivelany na ny ao anatiny.
Tamin'ny taon-dasa tamin'ity fotoana ity, tamin'ny 22 febroary lasa teo, dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo fotodrafitrasa vaovao ireo i Apple Park: Apple Park, ary ao amin'ireo tranony misy azy no ahitantsika ny Steve Jobs Teahter. fanomezam-boninahitra ny mpanorina ny orinasa miaraka amin'i Steve Wozniak.
Ireo trano Apple vaovao dia manodidina ny tany nananan'i Hewlett Packard teo aloha ary namboarina avokoa izy ireo. Ny iray amin'ireo olana natrehin'i Apple nandritra ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa vaovao ireo dia mifandraika amin'ny fanaovan-tany.
Araka ny fanadihadiana sasany, ny isan'ny hazo farany izay nambolena, na ny ivelany na ny ao anaty vala, manodidina ny 9.000, izay ahitantsika ny hazo paoma, hazo serizy, hazo apricot ... izay nahatonga ny tsy fahampiana an'ity karazan-kazo ity manerana an'i California, izay nahatonga ny ny vidin'io dia nitombo.
Ny tambajotran'ireo panneaux solaires izay misy eo amin'ny tapany ambony amin'ny campus rehetra dia mahavita mamatsy angovo 17 megawatt, izay ahafahany manome 75% ny filan'ny angovo ao amin'ilay sarotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple Park fananganana efa ho vita